Ny dokam-barotra Super Bowl dia mitentina $ 3 tapitrisa dolara isaky ny 30 segondra. Pepsi dia nanomana doka miisa 30 secoond sy doka 60 segondra… 12 tapitrisa dolara izany. Ary ny vidiny dia niakatra 10% teo anelanelan'ny 2008 sy 2009. Andao hanao ny matematika. 12 tapitrisa dolara izany hahatratrarana mpijery 98 tapitrisa .. na $ 0.12 eo ho eo isaky ny mpijery.
Ahoana raha nanohana fifaninanana 'dokam-barotra viraliny tsara indrindra' i Pepsi izay nahazo $ 1 tapitrisa ilay mpandresy? Miaraka amin'ny loka $ 1 tapitrisa fanampiny? Angamba nampiroborobo ny fifaninanana izy ireo nanerana ny Youtube, Twitter ary Facebook tamin'ny fampiasam-bola fanampiny $ 1 tapitrisa.
Dec 26, 2009 ao amin'ny 9: PM PM
Heveriko fa hevitra tsara lavitra sy maharitra lavitra kokoa ny tsy fanaovana doka Super Bowl ary mandany ny vola any an-kafa. Mt. Efa nanana mpikirakira horonantsary noforonina i Dew, ary nahita atiny tena tsara izy ireo. Momba ny sary famantarana, i Pepsi dia manandrana tonga ao amin'ny azy manokana, fa tsy mandondona ny endritsoratra Coke. Manontany tena aho hoe iza no tonga tamin'ny Logo voalohany, ny ekipan'ny fampielezan-kevitra Pepsi na Obama. Ilay sary famantarana dia toa tsy maneho na inona na inona.